Vehivavy nihantona teny Andraisoro : Nidoboka eny Tsiafahy ny vadiny -
AccueilSongandinaVehivavy nihantona teny Andraisoro : Nidoboka eny Tsiafahy ny vadiny
Vehivavy nihantona teny Andraisoro : Nidoboka eny Tsiafahy ny vadiny
29/09/2018 admintriatra Songandina 0
Naseho teo anoloan’ny fitsarana, omaly ireo olona miisa fito voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona teny Andraisoro. Roa tamin’ireo no fantatra fa naiditra am-ponja eny Tsiafahy, ary dia ny vadin’ity renim-pianakaviana ity, sy ny lehilahy iray nanatitra azy teny akaikin’ny Fofifa, ny alin’ny sabotsy lasa teo. Afakomaly no vita tanteraka ny fanadihadiana teny amin’ny zandary momba ity raharaha ity. Fantatra izao fa isan’ny nahiana fatratra ity rain-janany nadoboka am-ponja ity. Fantatra tamin’ny alalan’ny fanadihadiana ilay lehilahy iray mpiara-miasa tamin’ilay ramatoa mantsy, fa nisy fifamaliana teo amin’izy mivady. Izany indrindra no antony nahatonga ity farany hody alina niaraka tamin’ny mpiara-miasa aminy avy ao amin’ny banky “BMOI “Tanjombato, rehefa avy nisotrosotro teny an-toerana.
Tsiahivina fa tamin’ny 12 ora latsaka fahefany alina tany ho any izy no naterin’ilay mpiara-miasa taminy fiara teny akaikin’ny trano fonenany teny Andraisoro ihany. Rehefa lasa ity farany araka ny fitantarany dia niverina ity nisaofera azy. Izay ny ampitso no nahitana ny fatiny nihantona teo amin’ny tetezana.
Hatreto, azo heverina fa ity rangahy vadiny no tena tompon’antoka tamin’ny famonoana ny vadiny noho ny disadisan-tokantrano nisy teo amin’ny roa tonta, izay tsy inona fa resa-bola. Any amin’ny fitsarana indray vao mety ho fantatra ny tohiny.
Tsy misy ahiana. Marina fa efa ao anatin’ny fotoan’ny maitso ahitra mihitsy ny eto Madagasikara amin’izao fotoana izao eo amin’ny resaka vary. Efa misy anefa ny fepetra noraisin’ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Varotra sy ny ...Tohiny